China Home Kurovedza muviri Gym Workout Nhabvu Kwete Slip Tsika Yakadhindwa Eco Shamwari Nyowani TPE Fitness Yoga Mats Mugadziri uye Mutengesi | NQ
Yakakosha inonamira isina kutsvedza mameseji kune ese mativi uye kuwanda kwakakwirira kupfuura zvakajairwa yoga mateti, inopa yakanakisa traction uye yepamusoro kubata, yakanakira yakakodzera kudzidzira nzira zhinji dzeyoga. Asina kutsvedza pauriri hwehuni, pasi pe tile, pasi simende, yakasimba, isina latex, yakasimba simba rekudzivirira misodzi, Unhu husina kusimba.
1.Mamiriro ekunze-ane hushamwari Na6p yemahara kana yepasi rose chitupa
2.100% inogadziriswazve uye inogona kuora.
3.Seldom hwema painotanga kushandiswa.
4. Kusimba kwakasimba nekusimudzira kwepamusoro.
5. Mafashoni akasiyana siyana.
6. Maketani maviri akavezwa neToni Tone Colors.
Yakanakira mhando dzese dzekudzidzira sezvo iri makde yezvinhu zvinogara, zvinogara kwenguva refu.
Iyi yoga mat ndiyo inonyanya kushandiswa uye inonyanya kushandiswa mhando. Inogona kuwanikwa muyoga studio, zvikoro, makirabhu emafitness, kumba nekunze.
Vana vanogona kutamba pairi, isu tinogonawo kugara pairi kuti tione TV.
Kwete PVC uye hapana phthalates ine chepfu, saka hazvisi nani chete kune zvakatipoteredza asi zvakare zvine hutano kune iwe.
Kurema uye kuomarara kwakasimba, kunogara kwenguva refu kushandisa nekutakura zvirinyore.
Isina mvura uye guruva-chiratidzo, zviri nyore kuchenesa.
Kusimba kwakanaka uye yakasimba tensile simba, inogona kudzikisa marwadzo anogadzirwa pakati pemuviri nepasi.
Yedu yepamusoro kurovedzera mateti inowedzera nyaradzo kune yako yoga yekurovedza muviri. Yedu mukobvu isina-kutedzemuka mateki akanaka kune ese marudzi eyoga, kunyanya ekugadzirisa ekudzoreredza.
Chimwe chidimbu mufirimu inodzikira ine bhegi reyoga, zvidimbu zvina mubhokisi
Isu tiri boka revanhu rinoshanda mumweya weYoga.Kugutsikana kwako ndicho Chinangwa chedu.Tinodada nekupa imwe yematezi akanyanyisa pamusika.Mubatanidzwa wedu wakasarudzika weakavhurika uye akavharwa maseru zvinhu zvinopa musanganiswa wakakwana weziya- Mateki anouya nemhando dzakasiyana-siyana dzakasimba uye dzakasimba, asi dzisingakundi mukubwinya kwadzo.
Pashure: 2021 Kupisa Kutengesa Wholesale Portable Pilates Yoga Kunamatira Kwekumba Gym Exercise
Zvadaro: Wholesale mhasuru mitambo furo wega mudzidzisi simba rinogadziriswa Cast simbi Vinyl Kudhonza Neoprene dumbbell
Tsika Yakadhindwa Fitness Yoga Mats
Imba Exercise Gym Workout